Ch 11 John – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Jaona / Ch 11 John
11:1 Ary nisy lehilahy anankiray narary, Dia Lazarosy avy any Betania, avy ao amin'ny tanànan'i Maria sy Marta rahavaviny.
11:2 Ary Maria dia ilay nanosotra ny Tompo tamin'ny menaka manitra sy namaoka ny tongony tamin'ny volon-dohany; ny Lazarosy anadahiny no narary.
11:3 Noho izany, izy mirahavavy dia naniraka ho any aminy, nanao hoe:: "Tompo ô, indro, fa izay tia ny marary. "
11:4 Avy eo, rehefa nandre izany, Hoy Jesosy taminy:: "No anton'izany aretina izany tsy ho amin'ny fahafatesana, fa ny voninahitr'Andriamanitra, ka dia ny Zanak 'Andriamanitra mba hankalazana azy io. "
11:5 Ary Jesosy tia an'i Marta, sy ny rahavaviny Mary, ary Lazarosy.
11:6 Na izany aza, rehefa reny fa narary, Avy eo izy dia mbola nijanona tao amin'ny toerana iray nandritra ny roa andro.
11:7 Avy eo, Rehefa afaka izany,, hoy izy tamin'ny mpianany, "Andeha isika ho any Jodia indray."
11:8 Hoy ny mpianatra taminy: "Rabbi, ny Jiosy na dia ankehitriny aza nitady hitora-bato anao. Ary mankany ve ianao indray?"
11:9 Jesosy namaly: "Tsy roa ambin'ny folo ora amin'ny indray andro? Raha misy mandeha amin'ny antoandro, tsy tafintohina, satria hitany ny fahazavan'izao tontolo izao.
11:10 Fa raha mandeha amin'ny alina, dia tafintohina, satria tsy misy mazava ao aminy. "
11:11 Hoy izy hoe izany, ary rehefa afaka izany,, dia hoy izy taminy: "Ry Lazarosy namantsika dia matory. Fa alehako, ka mba hamoha azy. "
11:12 Ary toy izany koa ny mpianany nanao hoe:, "Tompo ô, raha matory izy, dia ho salama tsara. "
11:13 Nefa Jesosy nilaza ny fahafatesany. Nefa nataon'izy ireo kosa fa fialan-tsasatra niresaka momba ny torimaso.
11:14 Noho izany, Dia hoy Jesosy taminy mazava tsara, "Maty i Lazarosy.
11:15 Ary faly Aho noho ny aminareo aho, satria tsy teo, ka dia mba hinoanareo. Fa andeha isika hankany aminy. "
11:16 Ary avy eo Thomas, izay atao hoe ny Twin, hoy mpianatra namany, "Andeha isika ho any, koa, ka mba hiara-maty aminy. "
11:17 Ary toy izany Jesosy nandeha. Ary dia hitany fa efa natao tao am-pasana efatra andro.
11:18 (Ary dia tao akaikin'i Jerosalema Bethania, tokony ho dimy stadio.)
11:19 Ary maro tamin'ny Jiosy no efa tonga teo amin'i Marta sy Maria, mba hitsapa alahelo azy noho ny amin'ny anadahiny.
11:20 Noho izany, Marta, rehefa reny fa Jesosy efa tonga, nivoaka hitsena azy. Fa Maria nipetraka tao an-trano.
11:21 Ary avy eo dia hoy Marta tamin'i Jesosy: "Tompo ô, raha teto ianao, ny rahalahiko, dia tsy maty.
11:22 Fa na dia ankehitriny, Fantatro fa na inona na inona, dia hangataka avy amin'Andriamanitra, Andriamanitra dia hanome anao. "
11:23 Jesosy nanao taminy hoe:, "Ny anadahinao dia hitsangana Izy."
11:24 Fa hoy Marta taminy, "Fantatro fa hitsangana izy, amin'ny fananganana ny maty amin'ny andro farany. "
11:25 Jesosy nanao taminy hoe:: "Izaho no fananganana ny maty sy ny Fiainana. Na iza na iza mino Ahy, na dia efa maty, dia ho velona.
11:26 Ary izay rehetra velona ka mino Ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany ve ianao?"
11:27 Ary hoy izy taminy: "Azo antoka fa, Tompo. Mino aho fa ianao no Kristy, ny Zanak 'Ilay Andriamanitra velona, izay no nahatongavako amin'izao tontolo izao. "
11:28 Ary rehefa avy nilaza ireo zavatra ireo, dia lasa niantso mangingina an'i Maria rahavaviny, nanao hoe:, "Tonga ny Mpampianatra eto, ary antsoiny ianao. "
11:29 Ary rehefa nandre izany izy, dia nitsangana faingana izy ka nankeo aminy.
11:30 Fa Jesosy tsy mbola tonga tao an-tanàna. Fa Izy mbola tamin'izany toerana Marta efa nitsena azy.
11:31 Noho izany, ny Jiosy izay tao amin'i Maria tao an-trano sy nitsapa alahelo azy izay, rehefa nahita fa Maria nitsangana faingana ka nivoaka, dia nanaraka azy, nanao hoe:, "Izy dia nankany amin'ny fasana, ka dia mba hitomany any izy. "
11:32 Noho izany, Mary rehefa tonga ny teo amin'nitoeran'i Jesosy, rehefa nahita azy, dia niankohoka teo amin'ny tongony, ka nanao taminy hoe:. "Tompo ô, raha teto ianao, ny rahalahiko, dia tsy maty. "
11:33 Ary avy eo, Jesosy, nony nahita azy nitomany, ary ny Jiosy izay efa tonga tamin'ny azy nitomany, dia vonto ny fanahiny, ka lasa raiki-tahotra.
11:34 Ary hoy izy:, "Aiza moa no nandevenanareo azy?"Dia hoy ireo taminy, "Tompo ô, nanatona ary nahita. "
11:35 Ary Jesosy nitomany.
11:36 Noho izany, ny Jiosy nanao hoe:, "Akory ity haben'ny fitiavany azy!"
11:37 Fa hoy ny sasany;, "Moa ve tsy izay nampahiratra ny mason'izay teraka jamba no afaka mahatonga ity lehilahy ity tsy ho faty?"
11:38 Noho izany, Jesosy, indray mitaraina avy tao am-pony, nankany amin'ny fasana. Ary nisy lava-bato, ary ny vato efa napetraka eo amboniny.
11:39 Hoy i Jesosy, "Esory ny vato." Marta, ny anabavy 'Ilay efa maty, hoy izy taminy:, "Tompo ô, amin'ny alalan'ny ankehitriny dia manimbolo, Fa izao no andro fahefatra. "
11:40 Jesosy nanao taminy hoe:, "Tsy efa milaza aminareo fa raha mino, dia hahita ny voninahitr'Andriamanitra?"
11:41 Noho izany, dia nesoriny ny vato. Avy eo, nanopy ny masony, Hoy i Jesosy: "Ray, Misaotra anareo, satria efa renareo tamiko.
11:42 Ary fantatro fa mihaino ahy mandrakariva, Fa efa nolazaiko izany noho ny olona izay nijoro teo akaiky teo, ka dia mba hinoany fa Hianao no naniraka Ahy. "
11:43 Ary rehefa nilaza ireo zavatra ireo, dia niantso tamin'ny feo mahery, "Lazarosy, niseho."
11:44 Ary niaraka tamin'izay dia, Izay efa maty nivoaka, mifatotra any tongony aman-tanany amin'ny rivotra, mankao fatorana. Ary ny tavany dia voafatotra tamin'ny misaraka lamba. Hoy Jesosy taminy:, "Afaho izy ka avelao handeha."
11:45 Noho izany, maro tamin'ny Jiosy, izay tonga tao amin'i Maria sy Marta, ary izay efa nahita ny zavatra izay nataon'i Jesosy, no nino Azy.
11:46 Fa ny sasany teo kosa dia lasa nankany amin'ny Fariseo ka nilaza taminy ny zavatra nataon'i Jesosy.
11:47 Ary noho izany, ny avo mpisorona sy ny Fariseo nanangona ny Synedriona, ka dia nanao hoe:: "Inona no azontsika atao? Fa ity lehilahy ity manatanteraka famantarana maro.
11:48 Raha Aoka izy ho, Amin'izany fomba izany, dia izay rehetra hino Azy. Ary avy eo dia ho avy ny Romana ka haka ny fonenantsika sy ny firenentsika. "
11:49 Ary ny anankiray tamin'ireo, atao hoe Kaiafa, satria izy no mpisoronabe tamin'izany taona izany, hoy izy taminy: "Tsy mahatakatra na inona na inona.
11:50 Na no tonga saina fa ilaina ho anareo ny lehilahy iray no ho faty hamonjy ny firenena, ary ny firenena manontolo mba tsy ho very. "
11:51 Nefa tsy niteny izany avy amin'ny tenany, fa satria izy no mpisoronabe tamin'izany taona izany, dia naminany fa Jesosy ho faty hamonjy ny firenena.
11:52 Ary tsy ho an'ny firenena, fa mba hanangona ho iray ny zanak'Andriamanitra izay efa niparitaka.
11:53 Noho izany, ary hatramin'izay andro izay, dia nikasa ny hamono azy.
11:54 Ary noho izany, Jesosy tsy nandeha imasom-bahoaka tamin'ny Jiosy. Fa niditra tao amin'ny faritra akaikin'ny tany efitra, ny tanàna izay efa niantsoana Efraima. Dia nitoetra teo izy mbamin'ny mpianany.
11:55 Ary ny Paska ny Jiosy efa akaiky. Ary maro avy any ambanivohitra niakatra ho any Jerosalema talohan'ny Paska, ka mba nanamasina ny tenany.
11:56 Noho izany, izy ireo hitady an'i Jesosy. Dia niresaka tamin'i hafa, raha nijanona teo an-kianjan'ny tempoly: "Inona ny hevitrao? Ho tonga ho amin'ny andro firavoravoana ny andro?"